အလုပျ နဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ရောထှေးမပဈလိုကျနဲ့ – Shinyoon
အလုပျ နဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ရောထှေးမပဈလိုကျနဲ့
November 27, 2020 by Shin Yoon
တဈခါက ကြှနျမ အသညျးတှေ ပိုးဆိုးပကျစကျ ကှဲခဲ့ဖူးတယျ အနာဂတျတှအေထိ အိပျမကျတှေ အတူမကျခဲ့ပွီးမှ လထေဲတိုကျအိမျဆောကျခဲ့တဲ့ အဖွဈအပကျြမြိုးလို သစ်စာဖောကျမှုတှကွေားမှာ ပြောကျခွငျးမလှ ပြောကျပကျြသှားခဲ့တာ ကြှနျမ အနာဂတျတှကေော အိပျမကျတှကေော ရညျမှနျးခကျြတှကေော အစစအရာရာ ပွိုကပြကျြစီးသှားတဲ့အထိ ကြှနျမ အသညျးတှေ ကှဲခဲ့ဖူးပါတယျ
ထမငျးလဲ မစားဖွဈခဲ့သလို တခြို့ညတှဆေို ညလုံးပေါကျတဲ့အထိ မကျြရညျတှနေဲ့ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှနေဲ့ မကျြလုံးတှေ မို့အဈနတေဲ့အထိ ငိုခဲ့ဖူးပါတယျ ဒါပမေယျ့. . . ခံစားခကျြတှကေို အလုပျနဲ့ ရောထှေးပဈလိုကျလို့ မဖွဈဘူးလေ ကြှနျမကိုယျကြှနျမ ဆကျပွီး မရပျတညျခငျြတော့ဘူးဆိုရငျတောငျ အနောကျမှာ ကြှနျမကို မှီခိုပွီးရပျနတေဲ့လူတှအေတှကျ အိပျမကျတှဆေကျပွီး မကျနရေဦးမယျ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ဆကျပွီးထားနရေဦးမယျလေ
အငိုမကျြလုံးတှကေို အပွုံးတှနေဲ့ ဖုံးပွီး အလုပျထဲ စိတျမပါတောငျ စိတျနှဈပွီး လုပျခဲ့ဖူးပါတယျ ။ ဘ၀က ဘ၀ပါပဲ ခံစားခကျြက ခံစားခကျြပါပဲ ရောထှေးမပဈလိုကျနဲ့သမ်မတကနေ အမှိုကျကြုံးတဲ့လူအထိ လူတိုငျးမှာ ခံစားခကျြကိုယျစီနဲ့ပါ အဆငျပွနေတော ဟုတျခငျြမှဟုတျလိမျ့မယျ ဒါပမေယျ့ နရောတိုငျးမှာ နှလုံးသားကိုခညျြး ဦးစားပေးလို့မဖွဈဘူးလေ
ဒဏျရာ ဒဏျခကျြတှေ ရလာတဲ့အခါ ကိုယျပိုငျတဲ့ အိပျခနျးလေးထဲမှာ အားရပါးရငိုပါ ပေါကျကှဲပဈပါ အလုပျထဲကို သယျမလာနဲ့ တဈကနျ့စီပဲ ထားတာ အကောငျးဆုံးပဲမပြျောပဲ ပွုံးတတျဖို့ ရငျ့ကကျြဖို့လိုတယျဆိုတာထကျ အဓိကနဲ့သာမည ခှဲခွားတတျဖို့ ပိုပွီးလိုပါတယျ ခံစားခကျြကို ဦးစားပေးလှနျးတဲ့လူတှကေ ဘ၀မှာ ပိုပွီးခကျခဲတတျကွတယျ
ဘ၀ . . . ဆကျလြှောကျရမယျ့လမျးတှမှေ အမြားကွီးပဲ ခလုတျလေးတျိုကျရုံနဲ့ ရပျတနျ့လိုကျလို့မှ မဖွဈတာ ကိုယျရပျလိုကျတဲ့အခါ ကိုယျ့ရှငျသနျခဲ့ခွငျးက အသကျမဲ့သှားမှာပေါ့ ဘယျသူ့အတှကျမှ အသုံးမ၀ငျ လောကမှာ လူဖွဈလာရတာ ရှုံးတယျ လူပိုသကျသကျပဲ ကိုယျလိုခငျြတဲ့အရာတှေ ဖွဈမလာရုံနဲ့ လကျလြှော့ပဈလိုကျတာတှလေဲ မှားတယျ
ကလေးရေ . . . ဖွဈနိုငျရငျ ခံစားခကျြသကျသကျ အလုပျသကျသကျ တဈကနျ့စီထားပါ ။ နာကငျြနရေမှုတှကေို အလုပျထဲမှာ သယျမလာနဲ့ ဘ၀အတှကျ ဆကျပွီး လြှောကျရမယျမှနျးသိရငျ ဆကျပွီးပဲ လြှောကျပါ
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မလိုခငျြတော့တဲ့အခါ ကိုယျ့ကို လိုအပျနတေဲ့ လူတခြို့ရဲ့ မကျြနှာတှကေို တဈခကျြလောကျဖွဈဖွဈ ငဲ့ကွညျ့ပါ ။ခံစားခကျြကို ရငျဘတျကွီးနဲ့ အပွညျ့အသိပျ ခံစားတတျသလို အလုပျကို အလုပျနဲ့တူအောငျလဲ လုပျတတျစခေငျြတယျ ။
အလုပ် နဲ့ ခံစားချက်တွေကို ရောထွေးမပစ်လိုက်နဲ့
တစ်ခါက ကျွန်မ အသည်းတွေ ပိုးဆိုးပက်စက် ကွဲခဲ့ဖူးတယ် အနာဂတ်တွေအထိ အိပ်မက်တွေ အတူမက်ခဲ့ပြီးမှ လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုးလို သစ္စာဖောက်မှုတွေကြားမှာ ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်ပျက်သွားခဲ့တာ ကျွန်မ အနာဂတ်တွေကော အိပ်မက်တွေကော ရည်မှန်းချက်တွေကော အစစအရာရာ ပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့အထိ ကျွန်မ အသည်းတွေ ကွဲခဲ့ဖူးပါတယ်
ထမင်းလဲ မစားဖြစ်ခဲ့သလို တချို့ညတွေဆို ညလုံးပေါက်တဲ့အထိ မျက်ရည်တွေနဲ့ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ မျက်လုံးတွေ မို့အစ်နေတဲ့အထိ ငိုခဲ့ဖူးပါတယ် ဒါပေမယ့်. . . ခံစားချက်တွေကို အလုပ်နဲ့ ရောထွေးပစ်လိုက်လို့ မဖြစ်ဘူးလေ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ဆက်ပြီး မရပ်တည်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်တောင် အနောက်မှာ ကျွန်မကို မှီခိုပြီးရပ်နေတဲ့လူတွေအတွက် အိပ်မက်တွေဆက်ပြီး မက်နေရဦးမယ် မျှော်လင့်ချက်တွေ ဆက်ပြီးထားနေရဦးမယ်လေ
အငိုမျက်လုံးတွေကို အပြုံးတွေနဲ့ ဖုံးပြီး အလုပ်ထဲ စိတ်မပါတောင် စိတ်နှစ်ပြီး လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဘ၀က ဘ၀ပါပဲ ခံစားချက်က ခံစားချက်ပါပဲ ရောထွေးမပစ်လိုက်နဲ့သမ္မတကနေ အမှိုက်ကျုံးတဲ့လူအထိ လူတိုင်းမှာ ခံစားချက်ကိုယ်စီနဲ့ပါ အဆင်ပြေနေတာ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် နေရာတိုင်းမှာ နှလုံးသားကိုချည်း ဦးစားပေးလို့မဖြစ်ဘူးလေ
ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေ ရလာတဲ့အခါ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ အိပ်ခန်းလေးထဲမှာ အားရပါးရငိုပါ ပေါက်ကွဲပစ်ပါ အလုပ်ထဲကို သယ်မလာနဲ့ တစ်ကန့်စီပဲ ထားတာ အကောင်းဆုံးပဲမပျော်ပဲ ပြုံးတတ်ဖို့ ရင့်ကျက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာထက် အဓိကနဲ့သာမည ခွဲခြားတတ်ဖို့ ပိုပြီးလိုပါတယ် ခံစားချက်ကို ဦးစားပေးလွန်းတဲ့လူတွေက ဘ၀မှာ ပိုပြီးခက်ခဲတတ်ကြတယ်
ဘ၀ . . . ဆက်လျှောက်ရမယ့်လမ်းတွေမှ အများကြီးပဲ ခလုတ်လေးတ်ိုက်ရုံနဲ့ ရပ်တန့်လိုက်လို့မှ မဖြစ်တာ ကိုယ်ရပ်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ရှင်သန်ခဲ့ခြင်းက အသက်မဲ့သွားမှာပေါ့ ဘယ်သူ့အတွက်မှ အသုံးမ၀င် လောကမှာ လူဖြစ်လာရတာ ရှုံးတယ် လူပိုသက်သက်ပဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်မလာရုံနဲ့ လက်လျှော့ပစ်လိုက်တာတွေလဲ မှားတယ်
ကလေးရေ . . . ဖြစ်နိုင်ရင် ခံစားချက်သက်သက် အလုပ်သက်သက် တစ်ကန့်စီထားပါ ။ နာကျင်နေရမှုတွေကို အလုပ်ထဲမှာ သယ်မလာနဲ့ ဘ၀အတွက် ဆက်ပြီး လျှောက်ရမယ်မှန်းသိရင် ဆက်ပြီးပဲ လျှောက်ပါ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မလိုချင်တော့တဲ့အခါ ကိုယ့်ကို လိုအပ်နေတဲ့ လူတချို့ရဲ့ မျက်နှာတွေကို တစ်ချက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် ငဲ့ကြည့်ပါ ။ခံစားချက်ကို ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ အပြည့်အသိပ် ခံစားတတ်သလို အလုပ်ကို အလုပ်နဲ့တူအောင်လဲ လုပ်တတ်စေချင်တယ် ။
မကျြရညျကတြိုငျး ပြော့ညံ့တာမှ မဟုတျတာ
ကိုယျမရှိလဲ ပြျောနတေဲ့ လူတဈယောကျအတှကျ ကနြတေဲ့ မကျြရညျတှကေို ဒီနပေဲ့ အပွီးသုတျလိုကျပါ